Sajhasabal.com | Homeगर्भ कुन समयमा कसरी यौनसम्पर्क गर्दा रहन्छ ? जानी राखौ
मेरो विवाह भएको चार महिना भयो । सम्भोग गर्दा वीर्य अलिकति बाहिर निस्कन्छ, भित्र बस्दैन । धेरै पटक यस्तो भैसक्यो । हामीले के गर्नुपर्छ ? बच्चा कसरी बस्छ ? कति पटक भित्र झार्ने हो र कसरी ? जहिले पनि अलिकति वीर्य बाहिर निस्कनुको कारण के होला ?
सन्तान कहिले ?
तपाईंहरू श्रीमान्–श्रीमतीले सल्लाह गरेर आफूले चाहेको बेला सन्तान जन्माउन सक्नुहुन्छ । विवाह भएको भर्खर चार महिना मात्र हुँदैछ । उमेर त लेख्नुभएको छैन, तर सन्तान जन्माउने हतार भएको हो वा होइन भन्ने कुरा पत्रमा स्पष्ट छैन ।
उमेरको कुरा गर्दा २० वर्षभन्दा पहिले सन्तान जन्माउनुलाई आमा र शिशुको स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले राम्रो मानिँदैन ।
परिवार नियोजनको अर्थ कहिले र कतिवटा सन्तान जन्माउने भनेर आफैंले लिइएको निर्णय अवलम्बन गर्नु हो तर बोलिचालीको भाषामा हामीले परिवार नियोजन गर्ने भन्नाले सन्तान नजन्माउने कुरा बुझ्छौं ।
सन्तान जन्माउन तपाईंसँग अध्ययन वा वृत्तिविकाससम्बन्धी प्राथमिकता के छन् भन्ने कुरामा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । विशेष गरेर सन्तान जन्माइसकेपछि उसको हेरचाहमा पर्याप्त समय र धन लगाउन आवश्यक हुन्छ । त्यसका लागि तपाईं तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, राम्रोसँग सोचविचार गर्नुपर्छ ।
वीर्य किन बाहिर निस्कन्छ ?
पुरुषले चरमसुख (orgasm) पाउने हाराहारीमा लिंगबाट एक प्रकारको सेतो तरल पदार्थ निस्कन्छ जसलाई वीर्य (semen) भनिन्छ । यही वीर्यमै शुक्रकीट(sperms) हुन्छन् । एकपल्ट वीर्य स्खलन हुँदा यस्तै ३ देखि ५ मिलिलिटर (५ मिलिलिटर भन्नाले १ चिया चम्चा जति) वीर्य निस्कन्छ । वीर्यमा हुने शुक्रकीटको संख्या सधंै एकैनासको नहुन सक्छ । शुक्रकीटको संख्या ४ देखि १२ करोड प्रतिमिलिटरसम्म हुनुलाई सामान्य मानिन्छ ।
सामान्यत: यसरी वीर्य बाहिर निस्कँदा गर्भधारण नहुने होइन । यसले त पर्याप्त मात्रामा वीर्य स्खलन भएको कुरालाई संकेत गर्छ । त्यसैले यस विषयमा अनावश्यक चिन्ता गर्नु पर्दैन ।
गर्भको सुरुवात पुरुषबाट निस्कने शुक्रकीट र स्त्रीमा विकसित डिम्बको मिलनबाट हुन्छ । सामान्य रूपमा भन्नुपर्दा गर्भधारण हुन मुख्य रूपमा १. डिम्ब निष्कासन, २. यौनसम्पर्क, ३. वीर्य स्खलन, ४. डिम्ब निषेचन तथा ५. डिम्ब रोपणजस्ता कुरा हुनु आवश्यक छ ।
यौनसम्पर्कका बेला पुरुषको वीर्य स्लखलन हुँदा निस्किएका करोडौं शुक्रकीटमध्ये केही पाठेघरको मुख हुँदै पाठेघर र त्यसपछि डिम्बबाहिनी नलीमा पुग्छन् । त्यहाँ परिपक्व भएको डिम्बमा ती असंख्य शुक्रकीटमध्ये एकको मात्र मिलन हुन्छ । यसरी मिलन हुने प्रक्रियालाई निषेचन (FERTILIZATION) भनिन्छ । यसरी शुक्रकीट र डिम्बको मिलन भएको कोषलाई युग्मज (ZYGOTE) भनिन्छ र यही नै पछि विकसित भएर शिशु बन्छ।
कसरी यौनसम्पर्क गर्ने ?
नियमित यौनसम्पर्क गर्दा एक सामान्य दम्पतीको महिनामा यस्तै १५ देखि २५ प्रतिशत गर्भ रहने सम्भावना हुन्छ । चार–पाँच महिनामा यो यस्तै ५० प्रतिशत अनि एक वर्षमा करिब ८० प्रतिशत पुग्छ । यद्यपि महिनावारी ठीक २८ दिनमा नभै ढिलो–चाँडो हुन्छ भने केही सोच्नुपर्ने हुन्छ किनभने यो भरपर्दो नहुन सक्छ । गर्भ निरोधको कुनै साधन प्रयोग नगरी एक वर्षसम्म नियमित रूपमा यौनसम्पर्क गर्दा पनि गर्भ रहेन भने कतै केही खराबी छ कि भनेर खोजतलास गर्न परीक्षण गराउनुपर्ने हुन्छ ।
माथि भनिएझैं योनिबाट वीर्य बाहिर निस्कनु सामान्य नै भएकाले कुनै विशेष यौन आसन अपनाउनु पर्दैन । तपाईं माथितिर बसेर गर्दा होस् वा तपाईंका श्रीमान्, राम्रोसँग वीर्य स्खलन भए शुक्रकीट पाठेघर हुँदै डिम्बवाहिनी नलीसम्म पुग्न सक्छ । कति पटक यौनसम्पर्क गर्ने भन्ने कुरा त तपाईंको इच्छामा भर पर्ने कुरा हो । -साप्ताहिकबाट